Oslo: Askari boolis ah ayaa ku dhaawacmay, weerar hubeysan ayaa la dilay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Norway » Oslo: Askari boolis ah ayaa ku dhaawacmay, weerar hubeysan ayaa la dilay
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • Wararka Dowladda • News • Wararka Norway • Dadka • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Oslo(CYN)Weerar mindi loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada Oslo: Askari boolis ah ayaa la dhaawacay, qof weerarka geystayna waa la dilay.
Ilaa iyo hadda lama oga waxa uu salka ku hayo tuhmanaha, inkastoo, sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah, ninkan ayaa ku qeylinayay “Allaahu Akbar” intii uu weerarka socday.
Nin shaadh la’aan ah ayaa dadka reer Oslo ku weeraray mindi weyn isagoo ku dhawaaqaya “Allaahu Akbar”.
Ninka weerarka soo qaaday ayaa isku dhacay askari ka tirsan booliska oo gaari watay, waxaana toogtay askari kale.
Weerar waalan ayaa lagu soo waramayaa inuu Norway ka yimid isagoo ka yimid gobolka Chechnya ee koonfurta Ruushka.
Oslo Askari boolis ah ayaa la dhaawacay ka dib markii nin shaadh la’aan ah, oo mindi weyn gashaday, uu dharaar cad weerar ku qaaday dadka ku nool caasimadda Norway, ka hor inta aysan toogasho ku dilin askarta booliska.
Muuqaalo iyo sawirro la soo qaaday oo internetka lagu wadaagay ayaa muujinaya baabuur si sharci darro ah u jiiray qof aan shaadhka lahayn oo ku sugan caasimadda Norway, isagoo mindi ku garaacaya, waxaana la sheegay inuu u hanjabay dad waddada marayay.
Ka dib markii uu baabuurka boolisku dib u tuuray, ninkii tooreeyaha ahaa waxa u suurtagashay in uu cagihiisa ku soo laabto, waxaanu furay albaabka rakaabka ee gaadhiga booliska. Halkaa marka ay marayso, waxa uu u muuqday in uu gacan ka hadal la galay sarkaal fadhiyey ka hor inta aanu saaxiibkii la soo bixin qoriga, oo uu toogto askarigii dilka geystay.
Madaxa howlgallada ee booliska Norway, Torgeir Brenden, ayaa sheegay in ninkan uu isku diyaarinayay in uu qof kale ku dilo, markii uu gaariga booliska ku dhuftay. "Wuxuu rabay inuu dadka ku weeraro waddada markii ay booliisku yimaadeen oo ay joojiyeen," Brenden ayaa yidhi.
"Laba qof ayaa ku lug lahaa, booliiskuna waxay u daryeeleen intii karaankooda ah," ayuu yiri taliyaha bilayska oo aan faahfaahin. Waxaa la fahamsan yahay in sarkaal uu ku dhaawacmay balse uusan halis ahayn. Brenden wuxuu sheegay in qof kale uusan dhaawacmin balse wuxuu raaciyay "waxaan qiyaasi karnaa inuu damacsanaa inuu wax badan weeraro."
Booliiska ayaa xaqiijiyay in shilkan uu dhacay abaaro 9-kii subaxnimo ee xiliga maxaliga ah ee qeybta Bislett Oslo. Xaalada Eedeysanaha ayaan la xaqiijin inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inuu isla goobta ku geeriyooday.
Sida laga soo xigtay warbaahinta Norway, ninka tooreeyaha ah ayaa lagu xukumay bishii December 2020 inuu geystay weerar kale oo qaawan oo midi ah June 4, 2019. Ninka weerarka geystay oo la sheegay inuu ku qeylinayay 'Allaahu akbar' intii uu socday weerarka 2019, ayaa la yaabay qoriga booliiska oo la xiray. Waxaa lagu xukumay daryeel caafimaad maskaxeed oo qasab ah iyo ganaax lacageed. Ninkan ayaa ku koray jamhuuriyadda koonfureed ee Ruushka ee Chechnya.
Weerarka ayaa yimid ka dib dhacdo ka dhacday Cannes, France Isniintii, markii nin mindi ku hubaysani uu albaabka ka furay gaadhi boolisku leeyahay oo uu ku weeraray mid ka mid ah saddexdii askari ee gudaha ku jiray. Tooreyda oo la sheegay in uu wax ka sheegay "nabiga" ayaa waxaa toogtay mid ka mid ah saraakiisha kale. Hal askari ayaa dhaawac soo gaaray.
Bishii Oktoobar, nin muslim ah ayaa shan qof ku dilay qaanso iyo fallaadho ka dhacay magaalada Kongsberg ee dalka Norway.